.Golaha Ammaanka ee Afrika oo qorshaynaya inay Soomaaliya Ciidamo u diraan.
.C/laahi Yuusuf oo billaabay Ololahii Musharaxnimadiisa.
.Xildhibaanadda Baarlamaanka Ku Meel Gaarka ah oo u Xusul duubaya inay ka qayb galaan Wajiga Saddexaad ee Shirka Soomaalida.
.Dagaal Maalintii Labaad ka socda Xaramka oo ka tirsan Gobaladda Jubbooyinka.
.Indhacade oo sheegay inuu tagayo Madasha Shirka Kenya.
Golaha Ammaanka ee Afrika oo qorshaynaya inay Soomaaliya Ciidamo u diraan.
Golaha Ammaanka ee Midnimadda Afrika ayaa qorshaynayo inay Ciidamo Nabad illaalin ah u soo diraan Soomaaliya. Sida laga soo xigtay xubno ka tirsan Golahaasi.
Kulan shalay ka dhacay Addis Ababa oo lagu dhamaystirayay Dhismaha Golahaasi ayaa Ajandayaashii looga dooday waxaa ka mid ahaa arrimaha Soomaaliya. Waxaana warbixino ku aadan Shirka Soomaalida uga socda Kenya ka jeediyay Kulankaasi Wasiiradda Arrimaha Dibadda Ethiopia. Jabuuti iyo Kenya. Iyadoo ugu dambayntiina warar ku dhow dhow kulankaasi ay sheegayaan in Guddi gaar ah loo xilsaaray inay soo diyaariyaan Hanaanka Ciidamo Nabad Illaalin ah looga hawl galin karo Soomaaliya.
Sannadkii 1993-dii ayeey ahayd markii ay ku fashilmeen 32 Dawladood oo hoos tagayay Qaramadda Midoobay hawl gal nabad illaalin ah oo ay Soomaaliya ka sameeyeen. Kadib markii ay guda galeen Muranka Dhinaca Siyaasadda ah ee u dhaxeeyay Kooxaha Soomaalida.
Indhacade oo sheegay inuu tagayo Madasha Shirka Kenya.
Guddoomiyaha Gobalka Shabeeladda Hoose, Shiiq Yuusuf Maxamed Siyaad “Indhacade” ayaa sheegay inuu ka qayb galayo Wajiga Saddexaad ee Shirka Soomaalida uga socda Kenya. Isla markaana uu ka sugayo Kenya inay u soo diraan Diyaarad gaar ah oo gaysa Nairobi.
Indhacade oo Xalay u waramayay Shabakadan ayaa sheegay inuu tagayo Kenya marka ugu horaysa ee Guddiga Hawl Fududaynta IGAD ay u soo diraan Diyaaradii gayn lahayd Madasha Shirka Soomaalida. Wuxuuuna sheegay in ka qayb galkiisa Shirka ay timid kadib markii la soo daayay Xuseen Caydiid oo Maamuulka Shabeeladda Hoose ay ku adkaysteen inaysan tagayn shirka illaa iyo inta dib loogu soo celinayo Xoriyadiisa.
Indhacade waxa uu sidoo kale sheegay inuu la tashiyo la sameeyay Golaha Samatabixinta Qaranka oo xubin uu ka yahay. Wuxuuna sheegay in Siyaasad ahaan uu isagu aaminsan yahay in Xalka Soomaaliya uu ku jiro in Miiska wadahadalka la isugu taggo. Laakiin waxa uu meesha ka saaray in Shirku uu afduubnaado Shaqsiyaad dano gaar ah leh.
Indhacade oo ka mida Siyaasiyiinta Curdunka ah ee la bartay intii uu socday Shirka Kenya ayaa haatan u muuqda nin Miisaan leh oo ku gor gortamaya Gobalka Shabeeladda Hoose.
Dagaal Maalintii Labaad ka socda Xaramka oo ka tirsan Gobaladda Jubbooyinka.
Dagaal xoogan ayaa lagu soo waramayaa inuu ka socdo Maalintii Labaad Deegaanka Xaramka oo ka tirsan Gobaladda Jubbooyinka ee Koonfurta Soomaaliya.
Dagaalkan oo u dhaxeeyo Maleeshiyooyinka Isbahaysiga Dooxadda Jubba iyo Maleeshiyooyin Beeleedyo laga barakiciyay Xaramka ayaa lagu soo waramayaa inuu gaystay Khasaaro Naf iyo maalba leh. Sida ay ku soo waramayaa Suxufiyiinta ku Sugan Jubbooyinka iyo Shabeeladda Hoose. Waxaana la soo gaarsiiyay Degmadda Buula Mareer oo ka tirsan Gobalka Shabeeladda Hoose Dhaawacyadda 9 qof oo ka tirsan Maleeshiyooyinkii dagaalamayay.
Wariye ku sugan Buulamareer ayaa sheegay inuu arkayay Dhaawacyo farabadan oo la soo galiyay Buulamareer halka qaarkoodna uu sheegay in loo soo gudbiyay Magaaladda Muqdisho. Waxaana uu sheegay in sidoo kale ay jiraan dad Rayid ah oo waxyeelo xoogan ay ka soo gaartay dagaalkaasi. Iyadoo inta badana ay Waxyeeladdu soo gaartay dadka reer Miyiga ahaa ee ka agdhawaa goobaha lagu dagaalamay.
Dagaalka Xaramka oo illaa iyo hadda aan xal loo helin ayaa labada dhinac ee dagaalamaya mid kastaa waxa uu jidaysanayaa inuu xaq u leeyahay inuu dagaal galo.
Isbahaysiga Dooxadda Jubba ayaa ku adkaysanaya inay la dagaalamayaan Burcad Jidgooyooyin ka samaystay Xaramka. Laakiin Beesha Shiiqaal oo ay ka soo jeedaan Maleeshiyooyinka Dhinaca kale ayaa aaminsan in dagaalku uu yahay mid Isir Sifayn ah oo Beesha dagta deegaankaasi lagu xasuuqayo. Sidaas darteedna ay xaq u leeyihiin inay isdifaacaan.
Dagaalkan ayaa billawday xilli ay Muqdisho ku kulansan yihiin Odayaal dhaqameedyo dadaal ugu jira sidii ay u soo afjari lahaayeen Colaada Xaramka. Laakiin dagaalkan cusub ayaa laga yaabaa inuu caqabad ku noqdo waan waantii laga dhex waday labada dhinac.
Xildhibaanadda Baarlamaanka Ku Meel Gaarka ah oo u Xusul duubaya inay ka qayb galaan Wajiga Saddexaad ee Shirka Soomaalida.
Xildhibaanadda Baarlamaanka Ku Meel Gaarka ah ee Soomaaliya ayaa dadaal ugu jira sidii ay uga qayb gali lahaayeen Wajiga Saddexaad ee Shirka Soomaalida oo ka furmay Magaaladda Nairobi ee Dalka Kenya.
Xildhibaanadda Baarlamaanka Ku Meel Gaarka ah ee Soomaaliya ayaa haatan olole xoogan ugu jira inay ku biiraan Ergooyinka Soomaalida ah ee ka qayb galaya Wajiga Saddexaad ee Shirka Soomaalida. Waxaana Xildhibaanadda qaarkood ay sheegeen inay iyagu jeebkooda iska dabarayaan si ay u tagaan Kenya. Laakiin Guddoonka Baarlamaanka ayaa ka codsaday Xildhibaanadda inay muujiyaan dul qaad si ay iyaga oo isku duuban u tagaan Madasha Shirka. Wuxuuna u xaqiijiyay Xildhibaanadda in loo diyaarin doono Diyaaradihii lagu gayn lahaa Nairobi.
Xildhibaanadda Baarlamaanka oo markii horaba ku yimid hanaan Beeleed ayaa qorshaynaya inay ku daba faylaan Beelahooda si ay uga doontaan Kasooni. Waxaana Xildhibanaddu ay maalmihii la soo dhaafay buux dhaafiyeen Madaxtooyadda xilli uu dalka ka maqayn yahay C/qaasim si loogu daad gureeyo Shirka Kenya.
C/laahi Yuusuf oo billaabay Ololahii Musharaxnimadiisa.
Col C/laahi Yuusuf Axmed oo ka mida Musharixiinta isu soo taagay Jagadda Madaxwaynanimadda Soomaaliya ayaa olole xoogan oo uu ku doonayo inuu ku soo baxo Mansabka ugu sareeya Soomaaliya ka billaabay Magaaladda Nairobi ee Dalka Kenya.
C/laahi Yuusuf ayaa shalay kulamo kaladuwan la kala yeeshay Odayaasha Dhaqanka ee Beelaha Soomaaliyeed. Wuxuuna u sharaxay hanaanka uu doonayo inuu awooda ugu qaybiyo Beelaha marka uu ka noqdo Madaxwayne Soomaaliya.
C/laahi Yuusuf ayeey xubno ka qayb galay kulanakaasi sheegeen inuu u ballanqaaday beel kasta Saami uu sheegay inuu ka siin doono Dawladda uu soo dhisi doono. Wuxuuna u qaybiyay shax ay ku qoran yihiin hab qaybsiga Beelaha ee Golaha Wasiiradda.
Beelaha Soomaaliyeed ayaa iyaguna sheegay inaysan kaligood gaari Karin go’aanka ay codka Kalsoonidda ku siinayaan C/laahi Yuusuf. Laakiin waxay u ballan qaadeen inay jawaab soo siin doonaan marka ay la tashiyo la soo sameeyaan dadka ay matalaan. Isla markaana soo xaqiijiyaan Cidda ay doonayaan inay codka ugu shubaan marka ay doorasho timaado.
Beesha Daarood ee uu ka dhashay C/laahi Yuusuf xubno ka tirsan ayaa sheegay inay C/laahi Yuusuf uu ka mudan yahay Jagadda uu isku soo sharaxay qab qablayaasha la sharaxan. Laakiin waxay sheegeen inuu yahay nin hal adag oo aan laga fujin Karin waxa uu damco. Sidaas darteedna waxay sheegeen in Xilligan adag oo Soomaalidu ay u baahan tahay in la isku soo jiid jiido uu C/laahi la kulmi karo Caqabado adag.
C/laahi Yuusuf Axmed oo hadda ka arrimiya Maamul Gobaleedka Punt Land waxa uu ka mid ahaa Saraakiishii Milatariga Soomaaliya kuwoodii ugu fir fircoonaa ee ka gadooday Hab Maamulkii Gen Maxamed Siyaad Barre. Waxaana uu C/laahi xilligaasi uga dhawaaqay Ethiopia Jabhadii SSDF oo sida la rumaysan yahay u bur burtay Maamul Xumo dhexdeeda ah.
C/laahi Yuusuf oo muddo dheer ku haminayay inuu Soomaaliya ka arrimiyo waxaa uu xiligan la liicayaa da’a ay u wehliso Xanuuno kale. Laakiin dadka u ololaynaya C/laahi Yuusuf ayaa aaminsan inuusan ka da’a waynayn ragga la loolamaya ee ay ka midka yihiin C/laahi Axmed Caddoow iyo Faarax Sendiko.
Musharaxiinta kale ayaa iyaguna billaabay olole xoogan oo ay ku doonayaan inay ku helaan Kalsoonidda beelaha. Waxaana billawday in loo kala dhuunto Odayaasha Dhaqanka oo ka hor Wajiga Saddexaad aan Miisaan ku lahayn Shirka Soomaalida.
Xuseen Caydiid oo isna dhawaan xabsi ku yaala Nairobi laga soo daayay ayaa dadaal ugu jira inuu noqdo Musharaxa kaliya ee Beelaha USC. Waxaana shalay uu kulan kula yeeshay Hoteelka uu degan yahay Odayaasha Dhaqanka ee USC. Laakiin Kulankaasi oo ahaa mid albaabaddu u xiran yihiin ayaan la ogayn illaa iyo hadda go’aanadda ka soo baxay.
C/qaasim Salaad oo isna ka mida Ragga afka lagu hayo inay jagadaasi ku soo bixi karaan ayaa ku soo jeeda Nairobi. Waxaana horay uu u sheegay in Dawladiisu ay u sharaxan tahay Dawladda lagu soo dhisi doono Kenya. Iyadoo la filayo in marka uu yimaado Madasha Shirka inuu billaabo olole xoogan oo uu ku doonayo inuu ku soo baxo Jagadaasi.
Si kastaba ha ahaateen ku dhawaad boqolka Musharax ee isku soo taagay Jagadda Madaxwaynanimadda Soomaaliya ee uu C/laahi Yuusuf ka mid yahay ayaa dhab ahaanta Miisaankoodu waxay soo bixi doontaa marka Baarlamaanka la dhiso oo ay timaado doorashadoodu. Waxaana waqtigaasi lagu kala hari doonaa hanaan Dimuquraadiya oo Soomaali oo dhan ay raali ka tahay.
Collin Powell oo sheegay inaysan Ciidamadoodu ka amar qaadan doonin Maamulka loo dhisi doono Ciraaq marka awooda lagu wareejiyo Dadka Ciraaqiyiinta ah.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Maraykanka. Collin Powell ayaa sheegay inaysan ciidamadooda wax amar ah ka qaadan doonin Dawladda Mustaqbalka loo dhisayo Ciraaq. Laakiin ay si Madaxbanaan uga hawl gali doonaan Ciraaq.
Powell waxa uu sheegay inay ciidamadoodu sii joogi doonaan Ciraaq kadib 30 ka June oo ah waqtiga loo qabtay in awooda Ciraaq lagu wareejiyo Ciraaqiyiinta. Wuxuuna sheegay inay la tashiyo la samayn Doonaan Maamulka Ciraaq. Balse waxa uu sheegay inay u madax banaanaan doonaan Hawlahooda. Isla markaana ay qaadi doonaan Tallaabo kasta oo ammaanka ay ku sugayaan.
Hadalka Powell ayaa daba jooga hadal uu shalay jeediyay Ra’iisul Wasaaraha Ingiriiska, Tony Blair oo sheegay in Maamulka Ciraaq loo dhisi doono uu Miisaan Siyaasadeed ku dhex yeelan doono Hawlaha Isbahaysiga Qabsaday Ciraaq.
Maraykanka ayaa u muuqda inuusan diyaar u ahayn inuu Talladda Ciraaq gacanta u galiyo Ciraaqiyiinta. Waxaana wali ay ku adkaysanayaan inay sii maamulaan Ciraaq. Iyadoo dadka Ciraaqiyiinta ah ay si wayn uga horyimaadeen inay aqbalaan Maamul Maqaar saar ah oo ka amar qaata Askarta Maraykanka.
Faafin: SomaliTalk May 26, 2003
Maan Deeq u Curatay Reer Minnesota!